यी १० नायिकालाई क्यामराको अगाडी कपडाले धोका दिएको थियो ! देखिएका थिए निजि अङ्ग ! - E ALL NEPAL
यी १० नायिकालाई क्यामराको अगाडी कपडाले धोका दिएको थियो ! देखिएका थिए निजि अङ्ग !
एजेन्सी- बलिउडक मात्रै हैन विश्वका जुनै पनि देशका नायिकाहरु आफूलाई सुन्दर साथै सबैको नजर तान्नको लागि ग्लामर देखिन अजिव कपडाको प्रयोग गर्ने गर्छन्। यस्तै अजिव कपडा लगाउँदा कहिले कहिँ नायिकाहरुलाई कपडाले धोका समेत दिने गर्छ। निजि अङ्ग समेत देखिने गरेर धोका दिँदा नायिकाहरु समय-समयमा ट्रोल पनि हुने गर्छन्। यस्तै केहि नायिकाहरुको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौ। यी नायिकाहरुलाई कपडाले धोका दिएको कारण ट्रोल बनेका थिए।
हालसालै मात्र उनले लगाएको कपडाले उनको लाज राम्रोसँग ढाक्न नसकेको कारण सामाजिक संजालमा अत्याधिक ट्रोल भएकी थिइन्।
भिनेत्री आलिया भट्टलाई पनि र्याम्पमा कपडाले धोका दिइसकेको छ। आफ्नो पहिलो र्याम्पमा समयमानै उनले बिना भित्रि वस्त्र आएको कारण उनको निजि अङ्गनै क्यामरामा कैद हुन पुगेको थियो।
बलिउडकी अभिनेत्री शमिता शेट्टी मुकेश भट्टको एक कार्यक्रममा पुगेकी थिइन्। जहाँ जाँदा उनले अन्डरवेयरनै लगाउन भुलेको कारण क्यामरामा निजि अङ्ग कैद भएको कारण उनको धेरै आलोचना समेत भएको थियो।
एक म्यागजिनको कार्यक्रममा पुगेकी नायिका करीना कपूर खानले धेरै छोटो कपडा लगाएको कारण उनका ट्रोल भएको थियो। फेशनको नाममा धेरै छोटो कपडा लगाएको कारण उनको धेरै अजिव किसिमको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरलन बनेको थियो।
नायिका सुष्मिता सेन पनि वारड्रोब मालफंक्शनको शिकार भैसकेकी छिन्। सुष्मिता सेन एक कार्यक्रममा पुग्दा धेरै सुन्दर कपडामा सजिएर गएकी थिइन्। तर उनले ध्यान नदिँदा आफ्नी भित्रि वस्त्र क्यामरामा काइदा भएको समत थाहा पाइनन्।
बलिउड मात्र हैन हलिउडका कलाकार समेत वारड्रोब मालफंक्शनको शिकार हुने गरेका छन्। यस्तै सुपरमोडेल कारालाई भने एक कार्यकममा यस्तो हुनबाट सलेना गोमेजले बचाएकी थिइन्।
टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबीको पनि लो-वेस्ट जीन्सबाट भित्रि वस्त्र देखिएको कारण ट्रोल बनेकी थिईन्।
सन् २०१२मा आयोजना भएको मिर्ची म्यूजिक अवार्डको क्रममा बिना भित्रि वस्त्र नलगाई ग्लामर कपडा लगाउँदा निजि अङ्गनै देखिएको थियो।
बलिउडकी धेरै बोल्ड र खुल्ला सोच भएकी नायिका मध्यकी नायिका राखी सावंत पनि क्यामराको अगाडी अजिव किसिमबाट कैद भैसकेकी छिन्।
सन् २००६ मा एक फेशन शोको क्रममा रैम्पमा कपडाले उनलाई धोका दिएको थियो।
कोलगेटमा टमाटर मिसारा लगाउदा हुने रहिछ यस्तो जुन देखेर तपाई दंग पर्नुहुनेछ (भिडियो सहित )